ओमकार टाइम्स प्रदेश १ सरकारद्वारा तीन बर्षे कार्यकालको कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक - OMKARTIMES
विराटनगर/ प्रदेश नं १ सरकारले आफ्नो तीन बर्षे कार्यकालको कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा प्रदेश सरकार स्थापनाको तेश्रो वर्षको अवसरमा आयोजित बिशेष समारोहका बिच प्रदेश सरकारले कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको हो । २०७४ फागुन ३ गतेदेखि मुख्यमन्त्री शेरधन राईको नेतृत्वमा गठन भएको प्रदेश सरकारले पछिल्लो ३ बर्षमा उद्योग, वाणिज्य, कृषि, पर्यटन, शिक्षा तथा स्वास्थ्य र सुचना तथा सञ्चारको क्षेत्रमा पर्याप्त कार्य गरेको जनाएको छ ।
सरकारले आफ्नो ५ बर्षे कार्र्यकालको मद्यावधिसम्म ७ वटै मन्त्रालयहरु मार्फत वार्षिक रुपमा क्रमशः ६३.९६, ५९.० र ७०.८३ प्रतिशत समष्टिगत आर्थिक प्रगति गरेको जनाएको हो । कोभिड महामारीका बाबजुद आर्थिक बर्ष २०७६÷०७७ मा प्रदेश सरकारले सबैभन्दा बढी ७०.८३ प्रतिशत आर्थिक उपलब्धि हाँसिल गरेको स्पष्ट पारेको छ । यस्तै आर्थिक बर्ष २०७६÷०७७ मा समग्र बजेटको करिब ४२ प्रतिशत विनियोजन प्राप्त गरेको भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयले ७४.७३ प्रतिशत वित्तीय र ८५.४२ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरि उत्कृष्ट उपलब्धि हाँसिल गरेको प्रदेश सरकारको बिश्लेषण छ ।
यस्तै यस अवधिमा प्रदेश सरकारका ५ निकायहरुले पनि समष्टिगत रुपमा लक्ष्यको आधारमा क्रमशः ७३.१६, ६९.३५ र ५६.५२ प्रतिशत बार्षिक प्रगति हाँसिल गरेको प्रदेश सरकारको अध्ययन छ । यस अवधिको समष्टिगत औसत उपलब्धि भने ६३.८४ प्रतिशत रहेको सरकारले जनाएको छ । प्रदेश सरकारका अनुसार पछिल्लो ३ बर्षमा पर्यटन क्षेत्रको विस्तारका लागी प्रदेश नं. १ का पर्यटकीय गन्तव्यहरुमा ८७ किलोमिटर पर्यटकीय राजमार्र्ग, १४ वटा भ्युटावर र १ सय ५० वटा पार्क निमार्ण गरिएका छन् । ईलामको कन्याममा चिया परीक्षण अनुसन्धान तथा प्रर्वद्धन केन्द्रको स्थापना गरिएको छ । प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठानको गठन र सुविधासम्पन्न प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको स्थापना पनि यसै अवधिमा भएको प्रदेश नं. १ का प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी ‘प्यासी’ ले बताउनुभयो ।
२०७४ फागुनमा प्रदेश सरकार गठन हुँदा प्रदेशको कुल गार्हस्थ उत्पादन रु. ४ सय ८० अर्ब बराबरको भएकोमा यस अवधिमा सो बढेर रु. ५ सय ९५ अर्ब पुगेको प्रदेश सरकारकोे दाबी छ । सरकार गठन हुँदाको समयमा प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय ८ सय ९० अमेरिकी डलर रहेकोमा यस अवधिमा सो बढेर १ हजार ७१ अमेरिकी डलर पुगेको प्रदेश सरकारको तथ्याङ्क छ । यस्तै यस अवधिमा प्रदेश सरकारले आवश्यक कानुन निमार्ण समेत जोड दिएको जनाएको छ । यस अवधिमा ४९ वटा ऐन, २४ वटा नियमावली, २८ वटा कार्यविधि, १० वटा निर्देशिका र १ १ वटा मापदण्ड तथा गठन आदेश गरि कुल १ सय २३ वटा कानुुन निमार्ण गर्न प्रदेश सरकार सफल भएको प्रदेश नं. १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारका अनुसार पछिल्लो ३ बर्षको अवधिमा ९६.२३ किलोमिटर सडकको निमार्ण सम्पन्न भई कालोपत्रे भईसकेको छ । १ बर्ष अघिसम्म कालोपत्रे सडक निमार्णको प्रगति २७ किलोमिटर रहेको थियो । सोही अवधिमा ग्राभेल सडक पनि १ सय २९ किलोमिटरबाट वृद्धि भई ३ सय सय ७६ दशमलव ६ किलोमिटरमा पुगेको छ । यस्तै पछिल्लो ३ बर्षमा २२ वटा मोटोरेवल र ३६ वटा झोलुंगे पुल निमार्णको कार्य पनि सम्पन्न भएको प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शेरधन राईको भनाई छ ।
यस्तै पछिल्लो ३ बर्षमा प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र ९७.५ प्रतिशत जनसंख्यामा आधारभूत खानेपानी सेवाको पहुँच विस्तार गरेको छ । ७ सय ९९ वटा आधारभूत विद्यालयहरुमा सुचना प्रविधिको पहुँच वृद्धि गरेको छ । सरकारले भने श्रमिक समुहमा रोजगारी सिर्जना गर्न स्कीम बैंक कार्यक्रम समेत लागु गरि सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ ।